Ọgwụ osisi | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ọgwụ osisi
Atụmatụ kacha mma maka nlekọta na akuku nke calendula
A na-ewere Calendula dịka ọgwụ karịa ọgwụ osisi. Otú ọ dị, mmanụma-odo, okooko osisi na-egbukepụ egbukepụ na-acha anya mmiri na-ele anya karịa mma. A blooming calendula ga-ele anya dị mma ma na otu, na n'otu ihe akuku, n'etiti etiti ma ọ bụ dị ka a etiti.
Thyme: akuku, nlekọta, ozuzu
Otu obere ahịhịa na-esi ísì ụtọ - thyme, na-ekpuchi akọrọ na nkume a na-acha uhie uhie nke kapeeti okooko, emeela ka uche mmadụ dị ogologo. Ndị Ijipt oge ochie jiri ọgwụ gị mee ihe maka ememe. Ndị ọkà mmụta sayensị oge ochie (Avicenna, Dioscorides, Theophrastus) dere banyere ihe ndị dị ebube nke thyme (antiviral, antifungal and antibacterial).
Olee otú calendula ji: uru Njirimara na contraindications
Calendula bụ osisi ọgwụ, a makwaara dị ka ọgwụ na-agwọ ọgwụ. Osisi ahụ na-acha ọcha na okooko osisi odo-acha odo odo nke na-arụ ọrụ dị mma na floriculture, mana uru ya bara uru bụ àgwà bara uru. Na ndi mmadu ndi ogwu, ihe bara uru nke calendula bu ndi ozo n'imeso oria di iche iche.
Njirimara bara uru nke buttercups, ojiji nke ihe nsi di iche iche
Ntuchi bu otu n'ime okooko osisi kachasị ama nke okike kere. Ha na-ejikọta ihe nkenke: ike na adịghị ike, uru na nsogbu, ndụ na ọnwụ, ọgwụ na nsi. Osisi okooko osisi na-acha acha odo odo achọpụtawo onwe ha ogologo oge. Buttercup (Ranunculus) kwuru banyere Dioscorides (m na narị afọ AD) na traises ya. Akụkọ ifo oge ochie nke Scandinavians na Slav jikọtara okooko osisi buttercup na chi Odin na Perun.
Ngwa na ọgwụgwọ Njirimara nke Monarda
Monarda bụ ihe na-esi ísì ụtọ, osisi nke ezinụlọ Gubotsvetnye. Ala nna ya bụ North America. E jiriwo oge Monarda mee ihe dị ka ihe si esi na ọgwụ. Site na narị afọ nke XIX, ogwu a maara n'ụwa niile dị ka bergamot, American lemon balm, lemon Mint. Anụ osisi Bergamot bụ osisi kwa afọ ma ọ bụ osisi dị iche iche ruo mita isii na ọkara.
Kedu ihe bara uru verbena officinalis
Kemgbe oge ochie, verbena officinalis bụ ama maka uru dị iche iche bara uru. Ọrịa Celtic na-akpọ ya "nsọ." Ndị na-agwọ ọrịa na ndị dọkịta na-eji ọgwụ verbena agwọ ọrịa. N'isiokwu a, anyị ga-atụle ihe ndị mejupụtara ọgwụ, ọgwụ ndị bara uru nke verbena, ihe mgbochi na ojiji ya, ojiji ya na nri, nchịkọta na nchekwa nke ngwa ngwa nke verbena.
Anise: uru bara uru, ịme ihe na nkwadebe maka ihe gbasara ahụike
Anise bụ osisi a na-eme kwa afọ karịa ihe karịrị ọkara mita dị elu. Ngwurugwu ahụ bụ ogologo, epupụta na-adịchaghị mkpa na oghere ndị a na-agba gburugburu. Ọ na-acha ọkụ n'oge mbido July na obere okooko osisi ise na-acha ọcha, nke na-etolite obere inflorescences. N'August, osisi ahụ na-eme ka mkpụrụ osisi elongated dị elu karịa nke 3 mm.
Ihe niile gbasara ịkọ eto, ịgha mkpụrụ na ilekọta "ihe oriri na ụwa"
Anise bụ osisi nwere ọtụtụ ihe na-esi ísì ụtọ. Osisi a, nke a na-ejikarị eme ihe na nri, na-emepụta ọgwụ, cosmetology na nkà mmụta sayensị, enwetala nkwanye ùgwù maka ọdịmma ya n'etiti ọtụtụ nde mmadụ. Taa, a na-akọ anise na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba nile nke ụwa, ọ bụ naanị na Gris.
Ihe ndi ozo nwere ike imata akwukwo ahihia, ma ole na ole n'ime ha maara na ahihia abughi nani ihe ozo nye anyi, kamakwa osisi mara mma nke ana ejikari ya. Ọ bụrụ na ị jiri nlezianya na-amụ ihe nile nke uto na mmepe ya, ị ga-achọpụta na ị nwere ike ịga nke ọma na-eto eto na ụlọ.
Otu esi eto eto n'ubi ahu, kuru na ilekwa osisi n'ubi
Savory ma ọ bụ chobre, nke a makwaara dị ka ahịhịa ndụ, bụ nke na-esi ísì ụtọ kwa afọ, nke ziri ezi, nke nwere okpukpu iri nke 70. Ejiri ahịhịa viol na-acha ahịhịa, epupụta na-egbuke egbuke, na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Osisi ahụ na-acha obere odo, odo odo ma ọ bụ okooko osisi pink.
Mint na lemon balm - esi mata ọdịiche osisi
N'ebe ndị dịpụrụ adịpụ ma dị nso na ala ndị mmadụ, a na-ahụkarị osisi ndị dị ka mint na lemon balm. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ị na-amị ha ihe karịrị otu ugboro dị ka tii, ma ị gaghị enwe ike ijide n'aka nke ọma na osisi dị n'ihu gị. Ha nwere ọdịdị yiri nke ahụ na ihe ísì ísì, nke kpatara ihe kpatara nsogbu.
Ụdị Mint na nkọwa na foto
Mint bụ osisi bara nnọọ uru na nke bara uru nke mmadụ ji mee n'oge ochie. Na oge a, ọ na-achọ ọgwụ, nri, perfumery. Isiokwu ahụ na-enye ihe ọmụma banyere ụdị mint dị iche iche dị, a na-enyekwa nkọwa dị nkenke banyere ụfọdụ n'ime ha. Ị ma? Dị ka nchekwa data nke Osisi Osisi ahụ, ụdị anụ ahụ bụ Mint bụ ezinụlọ Luminous na-agụnye ụdị 42 na adọ ụdị ụfọdụ.
Ihe bara uru oji Sedan, ihe ngwọta ya na nsogbu
Poteto, tomato, na eggplants, nke anyị maara na ndụ anyị kwa ụbọchị, so n'ime narị mkpụrụ itoolu nke ezinụlọ osisi herbaceous kwa afọ, nke a maara dị ka ahịhịa. Onye nnọchiteanya a ma ama nke nnukwu ìgwè a bụ ajị ojii, onye ọgwụgwọ ọ na-abara ndị na-agwọ ọrịa amara kemgbe ogologo oge, ebe ọ bụ na oge Hippocrates, na ndị dọkịta adịghị echefu ya.
Kedu ka esi eto lovage na mba
Ogwu ndi ozo dika osisi ornamental bu ihe na-adighi nma, ma dika ogwu ogwu na ogwu di ocha. Esi ísì na tart uto nke lovage yiri celery. Nkọwa ejiji Maka otú ọ si anya lovage, French na-akpọ ya adịgboroja. Akwụkwọ nke osisi ndị ahụ dị ka ejima: egbuke egbuke, nke na-egbuke egbuke na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke nwere oghere na-egbuke egbuke kewara akụkụ dị iche iche.
Barberry: mejupụtara, ojiji, uru bara uru na contraindications
Barberry na ubi na ubi dị ụkọ taa. Ndị na-akọ ubi adịghị enwe mmasị karịsịa n'ịgha osisi bushes na ime ya kpam kpam n'efu. Barberry, ihe ndị bara uru ya na ihe ndị mmadụ na-eme na-eme ka ụmụ mmadụ mara ogologo oge. N'ime uru ya (na-enweghị iwepụ site na àgwà ndị ọzọ - eji achọ, melliferous, flavoring, wdg.
Nji uru na ngwọta nke ugbo
Ash - ụlọ nkwakọba ihe nke nri. Na ndi mmadu ndi ogwu, jiri akụkụ nile nke osisi: ogbugbo, okooko osisi, nkpuru na akwukwo. Ọgwụ ọjọọ, nke gụnyere ash, chekwaa n'ọtụtụ ọrịa. Nkọwa nke ash na ọgwụ mejupụtara Ash - osisi toro ogologo. Akwụkwọ ya nwere ntụpọ ojii. Akwụkwọ ọ bụla nwere akwụkwọ asaa ma ọ bụ karịa.
Kedu ihe dị iche n'etiti ọgwụ na ubi (meadow) sage
Sage, ma ọ bụ salvia - otu n'ime osisi ndị kacha baa uru. A sụgharịrị Latin dị ka "ahụike." Na nkà mmụta ọgwụ, a na-eji Salvia na ọgwụgwọ ndị a maara nke ọma dị ka chamomile na calendula. Ọ dị mfe nghọta n'ihi na-acha ọcha na-acha anụnụ anụnụ na ọgaranya okpukpo. E nwere ọtụtụ ndị na-eto eto, ha niile nwekwara ihe ọ bụla na ihe ọkụkụ.
Otu esi akụ na-eto eto catnip n'ogige
Kotovnik - obere ahịhịa perennial na ísì ụtọ. Ọ bụ ndị ezinụlọ Lambskin. Kotovnik na-atụle ezi mmanụ aṅụ na osisi ma na-agwọ Njirimara. Kotovnik: nkọwa nke osisi E nwere ihe karịrị 200 ụdị catnip. Kotovnik cat - otu n'ime ndị nnọchianya nke a genus. O nwekwara aha ndị ọzọ - catnip lemon ma ọ bụ catnip.
Kotovnik: ọgwụ ọgwụ na ngwa na nkà mmụta ọgwụ
Ahịhịa (matoshnik, shandra na-esi ísì ụtọ, balm) bụ ahịhịa nke ụlọ Labiotus. Kotovnik feline na-eji ọgwụ eme ihe n'ọtụtụ ebe. Ngwongwo akuku nyere aka n'eziokwu ahu bu na enwere uzo balm na United States na Canada. N'okpuru ọnọdụ okike ọ na-etolite na etiti n'etiti Eurasia.
Uru na nsogbu nke mmiri ara ehi thistle
Mmiri ara ehi nwere ọtụtụ ụdị ọgwụgwọ na contraindications iji mee ihe. Ọtụtụ ndị na-elekọta ubi malitere ịmalite osisi a pụrụ iche. Ọ bụ ezie na mmiri ara ehi nke ahịhịa na foto ahụ dị ka ogwu ogwu, ị kwesịrị ile ya anya nke oma - osisi ahụ nwere mmetụta bara uru n'ahụ ahụ mmadụ na-agwọ ọrịa dị iche iche.